musha » Treadmills » Proform » Proform Performance 600i Treadmill inotengeswa ne $ 799
2016 Proform Treadmill Kuita
The Proform Performance 600i Treadmill iri pa Sale ye $ 799 kubva ProForm.com Kwenguva Yakawanda Chete!
- Motokari: 2.75 CHP Mach Z ™ Yekutengesa mota
- Tenderedza: 0 - 12% Rongedza Range
- Cushioning: ProShox Cushioning ine 4 Shock Absorbers
- Bhandi: 20 ″ x 60 ″ Treadmill Bhandi
- 22 Workout Apps yakaratidza iFit Technology
- CoolAire Workout Fani
- 325 Lb. Kurema kugona
- Mutsara: 59.25 ″ x 36.63 ″ x 79.62 ″
- Hupenyu Hwose Dhizaini & mota garandi
- Makore maviri-Makore Waranti
- 1-Gore Rewarandi Warranty ~ Cherekedza: Hupenyu Hwose garandi Inotungamidza kune Hupenyu Hwako hwePakutanga Mutengi Chete
Proform iri kupa HERE SHIPPING YEMHURI paChikwata Chenguva Chidiki Chete
Click Here Kutenga iyo Proform Performance 600i Nhasi yeYoga $ 799 kubva kuProform.com! Kana Iwe Uri Kutsvaga Yakasiyana Yuniti, Tarisa uone iyo ProForm Treadmills Chikamu paIndaneti Yavo
Iyo $ 799 mutengo wekutengesa weProform Performance 600i treadmill inoshanda senge 1/5/16. Mutengo uye kuwanikwa kweiyi treadmill dhizaini inogona kuchinja. Chero mutengo waunobhadhara kuProform.com panguva yekutenga unozoshanda kune yako odha